Musharaxiinta Xisbiga Kulmiye Oo Banaanbaxii Maanta Wacdaro Ka Dhigay Burco | Somaliland.Org
Musharaxiinta Xisbiga Kulmiye Oo Banaanbaxii Maanta Wacdaro Ka Dhigay Burco
November 7, 2012	Burco (Somaliland.Org)- Sedex ka mid ah musharaxiinta Xisbiga Kulmiye ee uga sharaxan Degmadda Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta taageerayaashoodu Wacdaro ka dhigeen magaalada Burco banaanbaxii Xisbigaasi.
Musharixiintan oo kala ahaa Mubaarik Yuusuf Cilmi ,Cabdilaki Xasan Nuur iyo Maxamed Axmed Maxamuud (Diingool) oo ka mid ah musharixiinta Degmadda Burco ee Xisbiga Kulmiye ugu miisaanka weyn ayaa taageerayaashoodu banaanbaxii maanta ololaha doorashadda ku soo bandhigeen cududooda taageero xaafadaha magaalada Burco.
Xildhibaanaddan u tartamaaya golaha deegaanka Burco ayaa Kumanaan ka tirsan taageerayaashooda oo ku labisan maryo iyo boodhadh ay ku xardhanyihiin sawiradooda iyo lambaradooda codbixinta qudbado kala gadisan ugu jeediyay xarunta dhexe ee Xisbiga Kulmiye iyo xafiisyadooda magaalada Burco ,taasi oo ay ku soo bandhigeen barnaamijkooda siyaasadeed ee ay ku horumarinyaan adeegyada bulshada ee magaalada Burco hadii ay ku guulaystaan.
Waxaaney balan ku qaadeen hadii ay soo baxaan in ay la dagaalami-doonaan qabyaaladda iyo waxyaabaha kala fugaynaaya bulshada ku dhaqan magaalada Burco.
Geesta kale Xisbiga Kulmiye oo maanta ololihiisa doorashadu galay maalintiisii labaad ayaa masuuliyiintiisa gobolka Togdheer iyo taageerayaashu isusoobax balaadhan ka sameeyeen magaalada Burco ,halkaasi oo ay dadweynaha kula hadleen masuuliyiintooda heer gobol iyo heer degmo.
Bannaanbaxyadda ololaha doorashada deegaanka oo galay wajigii labaad ayaa magaalada Burco uga socda si nabadgelyo ah.
Previous PostGuddoomiye ku-xigeenka 2-aad ee Wakiiladda oo Farriin u diray Axsaabta iyo KomishankaNext Post‘Reer Awdal wixii u kordhay waanu u haneynay, Anagana Ha Noo haneeya’	Blog